WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Loo Diidayo Barcelaon, Iyo Ac Milan Oo Noqotay Boqorka Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2017 July Italy, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Loo Diidayo Barcelaon, Iyo Ac Milan Oo Noqotay Boqorka Suuqa Kala iibsiga
WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Loo Diidayo Barcelaon, Iyo Ac Milan Oo Noqotay Boqorka Suuqa Kala iibsiga
July 15, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 1
Suuqa kala iibsiga kooxaha Barcelona iyo Ac Milan ayaa noqday mid is badal weyn ku yimid xagaagan kadib markii kooxda Barcelona ku dhibaatootay xiddig kasta oo ay u dhaqaaq istiraahdo halka kooxda Ac Milan ay noqotay boqorka suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxda Barcelona ayaan ahayn koox ku fiican suuqa kala iibsiga sanadihii ugu dambeeyay laakiin waxa ay ku guulaystay in ay gacanta ku soo dhigto xiddigo fiicna oo kooxda ku hogaamiyay guulo waaweyn sida luiz suarez,Nemyar,Rakitic iyo Jérémy Mathieu.
Dhanka kale Ac Milan ayaa xariif ku ahayd sida loola soo saxiixdo xiddigaha xorta ah iyada oo kooxda magaca weyn leh raadsan jirtay xiddigaha heshiiskoodu dhacayo iyada oo xitaa la soo saxiixan jirtay xiddigo xilli uu heshiiskiisu dhacayo iyo xilliga uu kubada ka fariisanayo isku mid yihiin.
Laakiin arinta ayaa is badashay xagaagan Kooxda Barcelona ayaa ku dhibaatoonaysa in ay gacanta ku dhigto xidddigo waaweyn ilaa haatan.
Barcelona ayaa isku dayayday in ay la soo saxiixato Isco laakiin xiddiga ayaa qaab ciyaareed fiican soo bandhigay go,aansadayna in uu la sii joogo kooxdiisa Real Madrid.
Waxa ay isku dayday in ay la soo saxiixato Ander Herrera laakiin jose Mourinho ayaa u diiday inkasta oo uu xiddigu qirtay jacaylka uu Barcelona u qabo.
Waxa ay isku dayday in ay la soo saxiixato Ousmane Dembélé laakiin kumay guulaysan in ay saxiixiisa hesho, waxa ay sidoo kale isku dayay saxiixa Verratti laakiin waa ay weyday.
Waxa ay isku dayay in ay hesho saxiixa Dani Ceballos laakiin waxa ka hor qaaday kooxda Real Madrid waxa ay sidoo kale isku dayay in ay u dhaqaaqdo saxiixa Paulinho laakiin kooxdiisa reer china ayaa diiday.
Waxa si lama filaan ah u soo baxday in ay doonayso saxiixa Marouane Fellaini laakiin su,aasha ayaa ah Waa Maxay Sababta Ay Kooxuhu ula macaamili laayihiin kooxda Barcelona?
Dhanka kale Ac Milan ayaa noqotay boqorka suuqa kala iibsiga xagaagan lamana soo saxiixanayso xiddigaha ilaa ay lacag fiican ka soo bixiso waliba waxa ay suuqa galisay malaayin, waxayna ilaa haatan taageerayaasheedu u haystaan in ay riyo fiican ku jiraan.
Ac Milan ayaa la soo saxiixatay xiddigo da,doodu ay yartahay oo aan sanad ama 3 sano oo kale aan ciyaaraha ka fariisan doonin qaarkooda ha iska weynaadaanbee.
Waxana ay xiddigo kala soo wareegtaysaa kooxaha horyaalka Italy kula loolamaya sida juventus iyo kooxo kale oo badan.
Malah Juventus ayaaba ku faraxsan waxa ay ac Milan ka qabanayso suuqa kala iibsiga waxa ay go,aansatay in ay ku caawiso daafaceeda Bonnuci.
Barcellona ayaa si Rasmi ah u shaacisay Saxiixa Daafaca bidix ee Nelson Semedo waxnana ogaanay in ayna Kooxda Barcelona lacagtu dhib ku ahayn oo uuna wali suugu xirmi waliba ay awoodo in ay kooxda keento xiddigaha ay doonayo.
Sidoo kale milan ayaa la soo saxiixatay koox dhan waxana ay haatan u muuqataa in ay xilli ciyaareedka dambe si awood leh ugu tartami doonto hanashada horyaalka Italy.
Filed in: Italy, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino
Hal Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “WARBIXIN: Waa Maxay Sababta Loo Diidayo Barcelaon, Iyo Ac Milan Oo Noqotay Boqorka Suuqa Kala iibsiga”
Bile July 15, 2017 at 6:41 pm · Edit
Waligaba Barca ceebo u raadi dhakhyahay.
Barca mahan naadi ciyaartoy so ibsada e wa nadi so sara ciyartoyada kubada cagta aduunka wax ka badaly baal dahabana ka galay aduunka.